I-Youtube TV yethulwe ngokusemthethweni i-Apple TV | Ngivela kwa-mac
I-Youtube TV yethulwe ngokusemthethweni i-Apple TV
Kuyo yonke izolo ukwethulwa okulindelwe isikhathi eside kohlelo olusha lwe-Apple TV kusuka YouTube: I-YouTube TV. Emzameni wokwandisa ama-horizons wokuqukethwe okunikezwa yi-Apple esitolo sayo se-Apple TV, YouTube idale uhlelo oluthuthukisiwe olunokubukeka okuhle futhi okuhle kwale divayisi, into ebilinde cishe unyaka.
Lolu hlelo, ifika ngesikhathi esifanele se-United States ngomcimbi owaziwayo we Super Bowl, ezobanjwa kulo nyaka ozayo kaFebhuwari 4. YouTube ubelokhu enza umzamo oqhubekayo emasontweni adlule ukufika ngesikhathi somcimbi obukade ulindelwe, ongomunye wababukwe kakhulu ngabantu emhlabeni, futhi odala imikhawulo ephezulu yenzuzo ezweni laseNyakatho Melika.
Insizakalo yevidiyo ebukhoma enikezwa ngu I-YouTube TV, ngentengo engu- $ 35 ngenyanga, inikeza okubhaliselwe ezinhlelweni ze-TV ze- I-ABC, i-CBS, i-Fox, i-NBC, i-Disney, i-ESPN, nezinye eziningi. Ngeziteshi ezingaphezu kwezingu-40, kufaka phakathi izinhlelo nemidlalo ebukhoma, kanye nezindaba, iphinde inikeze isikhala se-DVR esingenamkhawulo futhi ivumela ukufinyelela kwi-akhawunti yomsebenzisi ngefu kusuka kunoma iyiphi indawo noma idivayisi, ukwazi ukufinyelela kokuqukethwe kwayo okulondoloziwe noma kunini lapho funa.
I-YouTube TV yethulwa ngo-Ephreli wangonyaka odlule, njengoba insizakalo yokusakaza bukhoma ye-premium uyakwazi ukuncintisana nokunikezwa okufana ne- I-Sling TV, iHulu ne-Playstation Vue, konke kufakwe ngaphambili kudivayisi ye-Apple.
Uhlelo lokusebenza isiyatholakala ukulanda ku-App Store ye-Apple TV yamamodeli wesizukulwane sesi-4 nesi-5. Njengoba ukwazi ukubona ezithombeni, uhlelo lokusebenza lunesitayela se-Google esibucayi futhi lusebenza ngempela futhi lusebenzela inhloso yalo. Ngiyethemba uyayithanda.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izaziso » I-Youtube TV yethulwe ngokusemthethweni i-Apple TV
I-AppleCare + ifika e-Australia naseNew Zealand
Le yindlela imiphumela yezezimali yekota yokuqala ye-Apple eyayiyiyo